नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : चुनावको भोली पल्ट नै सेकियो जनताको ढाड, फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, मर्ने जनतै हो !
चुनावको भोली पल्ट नै सेकियो जनताको ढाड, फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, मर्ने जनतै हो !
चुनावको भोली पल्ट नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले डिजेल र पेट्रोल र मट्टिलेतको मूल्य बढाएको हो। अब पेट्रोल १७० र डिजल १५४ प्रति लिटर काम भएको छ। शनिबार रातिदेखि लागु हुनेगरी मूल्य बढाउने निर्णय गरेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । चुनावलगत्तै सरकारले एकैपटक उच्च मूल्यवृद्धि गरेको हो। मूल्य बढाएपछि पनि नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४.३६ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ३१.४४ रुपैयाँ घाटा छ भनिन्दै आएको छ तर नाफा भयो भन्दै
कर्मचारीहरुलाई भने बोनस बाड्ने पनि यही निगम हो ।